Android ADB Command အသုံးပြူနည်း(Android ဖုန်းကို ကွန်ပြူတာမှ ထိန်းချုပ်ခြင်း) - အောင်အောင်ဆွေ Blog
Android ADB Command အသုံးပြူနည်း(Android ဖုန်းကို ကွန်ပြူတာမှ ထိန်းချုပ်ခြင်း)
Microsoft Window ကနေပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ Android ဖုန်းတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ Batch Command တွေရှိပါတယ် ...
Command Prompt အခြေခံရှိပြီးသားဆိုရင်တော့ တအားလွယ်ကူမှာပါ ..
ကျွန်တော်တို့ ဖုန်းတွေကို PC ကနေ ထိန်းချုပ်ဖို့ အရင်ဆုံးလိုတာကတော့ ဖုန်းရဲ့ Driver ပါပဲ ..
Samsung ဆို Samsung ဖုန်း Driver ၊ Huawei ဆို Huawei ဖုန်း Driver စတဲ့ ကိုယ့်ဖုန်းရဲ့ USB Driver တွေကို အရင် ကွန်ပြူတာမှာ Install လုပ်ထားရပါမယ် ..
ပြီးရင်တော့ ဖုန်း Setting ထဲကနေ ပြီး Development ထဲက USB Debugging ကို အခြေခံ ဥပဒေမဲပေးရပါမယ်။ နောက်ပြီး Setting ထဲကပဲ Application ထဲက Unknown Resource ကို လဲအမှန်ခြစ်ပေးလိုက်ပါ(install command တွေသုံးမှာမို့ လို့ ပါ) ..
အကုန်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ အောက်ကဟာလေးကို ဒေါင်းလုတ်ဆွဲပြီး Desktop ပေါ်မှာဖြည်ချလိုက်ပါ ..
ဖြည်ပြီးပြီဆိုရင် ... ဖြည်ထားတဲ့ ADB folder ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ ... ပြီးရင် Folder ထဲက လွတ်နေတဲ့ နေရာမှာ
Shift ကိုသေချာဖိပြီး Right-Click ထောက်လိုက်ပါ .. ပေါ်လာတဲ Context Menu ထဲမှာ Open Command Prompt Here ဆိုတာကို နှိပ်လိုက်ပါ .. Command Prompt Window အမဲရောင်လေးပေါ်လာပြီဆိုရင်
adb devices လို့ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ ..
ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖုန်းနဲ့ USB ကြိုးကနေ တစ်ဆင့် မှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်ပြီးပြီဆိုရင် List Of Devices ဆိုတဲ့ စာအောက်မှာ HexaDecimal Format နဲ့ စာတွေရှိနေရပါမယ် .. ရှိနေမှ နောက်Command တွေ ဆက်ရိုက်လို့ ရမှာပါ .. မရှိရင်တော့ ကြိုးနဲ့ အပေါ်က Setting တွေကို ပြန်စစ်လိုက်ပါဦး ..
အခု adb Command ကိုသုံးပြီး PC ထဲက Apk ကို ဖုန်းမှာသွင်းပါမယ် ...
သွင်းချင်တဲ့ apk ကို Desktop ပေါ်က ADB Folder ထဲကို Copy ကူးထည့်လိုက်ပါ ..
ဥပမာ 1mobile.apk ဆိုကြပါစို့..
adb install 1mobile.apk
ဒါဆိုရင် ဖုန်းထဲကို apk အလိုလို သွင်းပေးသွားမှာပါ ..အောက်ကပုံကိုကြည့်ပါ ..
ဒုတိယ Command / adb install -r 1mobile.apk ဆိုတာကတော့ သွင်းပြီးသား application ကိုသွင်းတဲ့ နေရာမှာသုံးပါတယ်။ -r = Reinstall
တတိယ Command မှာတော့ -s ဆိုတာလေးပိုပါနေပါတယ် .. -s ဆိုတာ SD Card ထဲကိုသွင်းမယ်လို့ ပြောတာပါ ...
ဒါဆိုရင် adb ကနေ Apk Install လုပ်တတ်ပြီလို့ ထင်ပါတယ်..
အခု Uninstall ပြန်လုပ်ပါမယ် ...
Uninstall လုပ်ရတာတော့ နည်းနည်းလေး ခေါင်းစားပါတယ် ။။ တော်တော်များများဆိုဒ်တွေမှာတောင် Uninstall လုပ်တဲ့ Command တွေမရေးထားကြပါဘူး ...
Uninstall လုပ်ဖို့ အတွက် Command ကတော့ အစောက လို Command ပါပဲ ..
adb uninstall me.onemobile.android ဒီနေရာမှာ ကွဲသွားတာတစ်ခုကတော့ install လုပ်တုန်းက 1mobile.apk ဆိုတဲ့ Application Name ကို ရိုက်ရပေမဲ့ ဒီ Uninstall နေရာမှာတော့ သူ့ ရဲ့ Package Name ကိုရေးပေးမှရပါတယ် ..
Package Name တွေကို Android ဖုန်းရဲ့ Setting ထဲက Running Application ကနေ ၀င်ကြည့်မှ ရပါတယ် .
1mobile ကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် 1mobile ကိုအရင် Run ထားပြီး Running App ကိုဝင် . 1mobile ပုံကို ထောက်လိုက်ရင် Process Panel ထဲမှာ APK Name နဲ့ Package Name ကို အပေါ်အောက် တွေ့ နိုင်ပါတယ် ...
နောက်တစ်နည်းကတော့ File တွေကို Phone နဲ့Computer ကြားထဲမှာ ဖလှယ်တာပါ .. ဒီနေရာမှာ File ဆိုတာကို ကြားဖြတ်ပြီး နည်းနည်းပြောချင်ပါတယ် .. File ဆိုတာ extension ပါတဲ့ data တွေကို File လို့ ခေါ်ပါတယ် ဥပမာ 1.jpg /song.mp3 //.. Folder ဆိုတာကတော့ extension မရှိတဲ့ အ၀ါရောင် Document တွေကိုခေါ်ပါတယ် .. ဖလှယ်တယ်ဆိုတာ ကို လွယ်လွယ်ပြောရရင် Copy/Paste လုပ်မှာပါ ..
ဖုန်းထဲက File တွေကို adb သုံးပြီး ကွန်ပြူတာထဲ ထည့်တာ ။။ Computer ထဲက File တွေကို ဖုန်းထဲ ထည့်တာတွေ ကို အောက်က command တွေ သုံးပြီး လုပ်ဆောင်ပါတယ် ..
adb push 1mobile.apk sdcard/
ဒီ Command က push ဆိုတဲ့ keyword ဟာ PC က File ကို ဖုန်းထဲကို တွန်းထည့်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောပါ ..
နောက်က sdcard ကတော့ SD Card ထဲကိုထည့်မယ်လို့ ပြောတာပါ ..
ပုံထဲက နောက် Line တွေက တော့ SD Card အောက်က ဘယ် Folder ထဲကို ထည့်မယ်ဆိုတာတွေပါ .. အတိအကျ ပြောထားတာပါ ..
(ထည့်ချင်တဲ့ File ကိုတော့ Desktop ပေါ်က ADB Folder ထဲကူးထားဖို့ လိုပါတယ်) ...............................................................................................................................................................
ဖုန်းထဲက File တွေ ပြန်ဆွဲထုတ်မယ် ...
စောစောက ထည့်လိုက်တဲ့ 1mobile.apk ကို PC ပေါ်ပြန်ဆွဲထုတ်ပါမယ် .. ကျွန်တော် ကအစမ်းအနေနဲ့ မို့ လို့ ဒါကိုပဲပြနေတာနော် .. တစ်ခြားဖုန်းထဲက ကြိုက်တဲ့ Folder အောက်က ကြိုက်တဲ့ File ကိုဆွဲထုတ်လို့ ရပါတယ် .. လမ်းကြောင်းနဲ့ နာမည်တော့သိထားရမှာပေါ့ ..
adb pull sdcard/1mobile.apk ဒီ Command က SD Card အောက်မှာရှိတဲ့ 1mobile.apk ကို Desktop ပေါ်က ADB Folder ထဲထည့်တာပါ
ဒုတိယ Command ကတော့ တစ်ခြားကိုယ် သိတဲ့လမ်းကြောင်းတွေကနေ ဆွဲထုတ်လို့ ရတယ်ဆိုတာ ပြတာပါ
နောက်ဆုံးအကြောင်းကတော့ ADB Folder ထဲကိုထည့်တဲ့အချိန်မှာ ဖုန်းထဲက apk name ကိုပါပြောင်းပြီး ထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောတာပါ
အသုံးပြုတတ်ကြပါစေ.... Android ADB Command အသုံးပြူနည်း(Android ဖုန်းကို ကွန်ပြူတာမှ ထိန်းချုပ်ခြင်း)